OnePlus3ဆန်းစစ်ခြင်း - သတင်း Rule
OnePlus3ဆန်းစစ်ခြင်း
ယခင် OnePlus စမတ်ဖုန်း "စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်လူသတ်သမားများ" ဖွစျအရေးဆို. ဒါကနေဆဲအတော်လေးတိကျမှုမရင့်, ဒါပေမယ့် OnePlus3တစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောစမတ်ဖုန်းထိပ်တန်းပြိုင်ဘက်၏လျော့နည်းထက်ဝက်ကျော်စျေးနှုန်းမှာစျေးနှုန်းသည်.
ပရီမီယံလူမီနီယံကိုယျခန်ဓာ, ကောင်းသော screen နဲ့ကင်မရာကို, အလွန်ကြီးစွာသောလက်ဗွေစကင်နာ, ဖောင်း-အခမဲ့ဆော့ဝဲ, နှင့်တနေ့ဘတ်ထရီ - တက Samsung ၏ထက်ဝက်ကုန်ကျစရိတ်မှာ
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “OnePlus3ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်အကွာအဝေးစျေးနှုန်းမှာစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဖုန်းကို” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, အင်္ဂါနေ့ 14 ဇွန်လအပေါ် theguardian.com များအတွက် 2016 17.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
အဆိုပါ OnePlus3တရုတ်ထုတ်လုပ်သူကနေနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်အကွာအဝေးစျေးနှုန်းများမှာရောင်းချနောက်ဆုံးထိပ်တန်းအဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်ပါတယ် OnePlus, Samsung ကထက်သိသိသာသာလျော့နည်းများအတွက်သန့်စင်ပြီးအတှေ့အကွုံကမ်းလှမ်းသော, HTC က, LG ကသို့မဟုတ် Apple က.
အဆိုပါ3ပြိုင်ဘက်ထက်သိသိသာသာလျော့နည်းပိုက်ဆံများအတွက်အကောင်းဆုံးအတှေ့အကွုံဖြစ်နိုင်သောထုတ်ကုန်များကိုရည်ရွယ်သေးငယ်တဲ့တရုတ် startup - - OnePlus ကနေစတုတ္ထစမတ်ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်အပေါင်းတို့နှင့်တကွလမ်းညွန်အတွက်ကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် OnePlus ကျော် 2.
အဆိုပါ capacitive ခလုတ်တစ်ခုခုကိုအိမ်တွင်ခလုတ်ကို၏ဘေးထွက်နှစ်ဖက်ဖလှယ်မှုနိုင်ပါတယ်, သင်သည်လက်ျာအပေါ်ကျော button ကိုလိုခငျြသငျ့သညျ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ OnePlus3အနည်းငယ်ပြန်ကွေးနှင့်အတူတစ် All-သတ္တုဖုန်း, ချောချောမွေ့မွေ့အနားနှင့်အနားဆီသို့ဦးတည်ပယ် tapers ကပုံဖန်ခွက်ရှေ့. ဒါဟာအတူတူထားကောင်းကောင်းခံစားရ, လက်တော်၌ရှိမယ့်အကြီးအမြင့်မားသောစျေးနှုန်းပြိုင်ဘက်အနေဖြင့်အလွန်အကောင်းဆုံးအဖြစ်ကောင်းသော.
အဆိုပါ 5.5in ကို full HD မျက်နှာပြင်တက်ကြွဖြစ်ပါသည်, inky လူမည်းနှင့်အတူ, ကြွယ်ဝသောအရောင်အဆင်းများနှင့်ကောင်းမွန်စွာအဖြူလူဖြူ. ဒါဟာအဖြစ် resolution မြင့်မားသည်မဟုတ်, ထို့ကြောင့်မ Pixel သိပ်သည်းအဖြစ်အဖြစ် Samsung ရဲ့ Galaxy S7 Edge, သို့သော်, သိသာ side-by-side သောဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာကို virtual-အဖြစ်မှန်နားကြပ်အတွက်အသုံးပြုရန်လည်းကြီးမြတ်မယ့်, ဒါပေမဲ့အများဆုံးဝယ်လက်မျက်နှာပြင်၏အရည်အသွေးနှင့်အတူပျြောရှငျလိမျ့မညျ.
အဆိုပါ display ကိုလည်းအလွန်ကျဉ်းမြောင်းသော bezel တစ်ဖက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်, သော OnePlus စေသည်3ကြီးမားတဲ့-ပြစမတ်ဖုန်းများအတွက်အတော်လေးကျဉ်းမြောင်းတဲ့, အများစုထက်ပိုစီမံခန့်ခွဲ device ကို၏ခြုံငုံအရွယ်အစားအတော်လေးသေးငယ်တဲ့ထားရှိမည်ကြောင့်. ရရှိနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံး 5.5in စမတ်ဖုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, ထို Samsung ရဲ့ Galaxy S7 Edge သူ့ရဲ့ကွေးကောက်မျက်နှာပြင်နှင့်အတူ, အ OnePlus3သာ 2.1mm ပိုမိုကျယ်ပြန်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအစက Samsung ထက်သာ 1.8mm ကြီး၏င်.
အဆိုပါအကြောင်းကြားစာကို slider ကိုကြီးလှ၏. Google က Android ဖုန်းတစ်လုံး၏တစ်ဦးစံအစိတ်အပိုင်းလုပ်သင့်တယ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
OnePlus မှထူးခြားသောအရာတစ်ခုမှာတိတ်ဆိတ်စွာအကြား switches သောဖုန်းရဲ့ဘေးထွက်အပေါ်တစ်ဦးအကြောင်းကြားစာ slider ကိုဖြစ်ပါတယ်, ဦးစားပေးအပေါင်းတို့နှင့်တကွအကြောင်းကြားစာများ. ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောရဲ့တိုင်း Android ဖုန်းတစ်ရှိသင့်.
သိုလှောင်ခြင်း: 64GB ကို
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်: Android မှာ 6.0.1 OxygenOS
ကင်မရာကို: 16OIS နှင့်အတူလွှတ်တော်အမတ်နောက်ဘက်ကင်မရာကို, 8အမတ် front-facing ကင်မရာကို
ထိပ်တန်း spec နီးပါး overkill ဖြစ်ပါသည်
Dual-Sim ထောက်ခံမှုဗြိတိန်တွင်ပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်ပါသည်, အထူးသဖြင့်ထိပ်တန်း-spec စမတ်ဖုန်းများအတွက်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ OnePlus3Qualcomm ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ထိပ်တန်းအဆုံးစမတ်ဖုန်း chip ကိုပြေး, အ Snapdragon 820, အရာ၏ကျန်ရှိသောအဘို့အအာဏာစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စမတ်ဖုန်းအများစုဖွယ်ရှိလိမ့်မည် 2016. ဒါဟာမည်သူမဆိုစမတ်ဖုန်းနှင့်အတူလုပ်ဖို့ကြိုးစားရန်ဖွယ်ရှိသည်နီးပါးဘာမှမကိုင်တွယ်လိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးတော်တော်လေးအစွမ်းထက် chip ကိုဖွင့်.
အ OnePlus သတ်မှတ်ကြောင်းအရာတစ်ခုမှာ3ကင်း pack ကိုမှ RAM ကို၎င်း၏ 6GB ဖြစ်ပါသည်. အများစုမှာစမတ်ဖုန်းများ2သို့မဟုတ် 3GB, ထိုကဲ့သို့သောက Galaxy S7 Edge အဖြစ်အချို့သော 4GB ရှိခြင်းနှင့်အတူ. အဆိုပါပိုပြီး RAM ကိုဖုန်းသူတို့တစ်ချိန်တည်းမှာပွင့်လင်းရှိသည်နိုင် browser ကိုအတွက်ပိုပြီး apps များနှင့် tabs များရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး 6GB ယခုအချိန်တွင်ဖြစ်နိုင်သောင်အရာကိုနည်းနည်း overkill ဖြစ်ပါသည်. အန်းဒရွိုက်သို့တည်ဆောက်မှတ်ဉာဏ်မော်နီတာမှာလိုက်ရှာ, ရရှိနိုင်ပါ RAM ကို၏ 5.6GB ၏, ငါအနိုင်နိုင်အစဉ်အဆက် 3.5GB ထက်ပိုမိုအသုံးပြု. ကွန်ပျူတာများနှင့်ဝသကဲ့သို့, သို့သော်, သငျသညျကိုသာအစဉ်အဆက်အမှုအရာတိုးတက်မှုအဖြစ်ပိုပြီးမှတ်ဉာဏ်လိုတော့တာပေါ့, ဒါကြောင့်သင်အနာဂတ်-proofing အဖြစ်ကမှာကြည့်ရှုနိုင်.
အဆိုပါ OnePlus3snappy ကြီးနှင့်ငါ့စမ်းသပ်ခြင်းတလျှောက်လုံးကောင်းကောင်းဖျော်ဖြေ, သိသာသုံးနေပြီသို့မဟုတ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုထစ်၏လမ်းနည်းနည်းနှင့်အတူ. သူကတောင်အပူချိန် 25C ရိုက်ခတ်သောအခါနေ့၌လည်းပူပြင်းလာပြီမပါဘဲ 30-မိနစ်ဂိမ်းအစည်းအဝေးများကိုင်တွယ်.
Bluetooth ကိုနားကြပ်မှတဆင့်သီချင်းနားထောင်လေးနာရီနဲ့ငါ့မူလတန်း device ကိုအဖြစ်အသုံးပြု, သုံးနာရီ app များကို browsing သို့မဟုတ် အသုံးပြု. သုံးစွဲ, ရံဖန်ရံခါဂိမ်းနှင့်ဓါတ်ပုံတွေကိုယူပြီး, သောနေ့ရက်ကာလကိုတစ်လျှောက်လုံးတွန်းအားပေးအကြောင်းကြားစာများရာပေါင်းများစွာနှင့်အတူ, အ OnePlus3ပဲကျော်ကြာမြင့် 24 စွဲချက်အကြားနာရီ.
ငါတစ်နေ့တာအတွင်းဘက်ထရီသက်တမ်းအတော်လေးကောင်းသည်ကိုသတိပြုမိ – ပိုပြီးအာဏာအချို့အကျိုးရှိစွာစမတ်ဖုန်းနှင့်အတူတန်းတူအပေါ် – ဒါပေမဲ့ standby အချိန်သည်နေ့ချင်းညချင်းဆငျးရဲခဲ့ကြောင်း, အကြားဆုံးရှုံး 12 နှင့် 16% တာဝန်ခံခုနစ်နာရီကြာတဲ့ရာဘေးစားပွဲပေါ်တိတ်ဆိတ်စွာအပေါ် left စဉ်. အများစုမှာ devices တွေကိုပတ်ပတ်လည်ကိုဆုံးရှုံး 1% တစ်နာရီကိုတာဝန်ခံ၏.
မထိမခိုက်တာဝန်ခံပဲအခြားမည်သည့်အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းဖြေရှင်းချက်တူများနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်, ဒါပေမယ့်ဖုန်းပူရပါဘူးကြောင့်ပညတ်စဉ်သငျသညျကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီးနေဆဲအမြင့်ဆုံးနှုန်းမှာတက် Top-. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
OnePlus အစ်မတရုတ်စမတ်ဖုန်း Oppo ရဲ့အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းနည်းပညာကိုထုတ်လုပ်လိုင်စင်ရခဲ့သည်, သောပါဝါအဒက်ဖို့အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းချစ်ပ်ရွေ့လျားနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားအများဆုံးအခြားအမြန်အားသွင်းဖြေရှင်းချက်ထက်လည်ပတ်, အစားဖုန်းထက်. အဆိုပါ Dash တာဝန်ခံစနစ်သည်မြို့ရိုးအသို့ပလပ်တစ်ခုခုမှဘက်ထရီအနီးဖုန်းရဲ့ကျဉ်းကျုတ်နယ်နိမိတ်ကနေအားသွင်းချိန်အတွင်းအပူ၏အကြီးဆုံးအရင်းအမြစ်လှုံ့ဆျော, ဖုန်းအဓိပ်ပာယျသငျကအပူလွန်ကဲစိတ်ပူစရာမလိုဘဲပိုမိုမြန်ဆန်ကိုအားသွင်းနိုင်.
သုညမှ charging 100% ယူ 72 မိနစ်, မှသုညစဉ် 75% ယူ 36 မိနစ်. ဒါကမသုံးနေကြွင်းသောအရာ၏အကောင်းဆုံးထက်အများကြီးပိုမြန်မယ့်. အဆိုပါခြားနားချက်ဖုန်းကိုမှာအားလုံးဖွင့်အပူမပြုခဲ့ကြောင်း, နှင့်အားသွင်းနှုန်းကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲပုံမှန်အတိုင်းတူကိုအသုံးပြုနိုင်မည်. အများစုမှာ devices များလွန်းပူပြင်းရနဲ့အားသွင်းမြန်နှုန်းနှေးကွေးရမယ်, အထူးသဖြင့်တစ်စုံတစ်ဦးအပေါ်မျက်နှာပြင်နှင့်အတူ device ကိုသုံးပြီးသောအခါ.
အဆိုပါဘက်ကိုသင် OnePlus အားသွင်းလျှင်ကြောင့်3မည်သည့်မဟုတ်တဲ့ Dash တာဝန်ခံသဟဇာတအာဏာကို Adapter ကနေတဆင့်, ထိုကဲ့သို့သောကွန်ပျူတာအဖြစ်, နှေးကွေးမှာဖုန်းကိုစွဲချက်, ပုံမှန်နှုန်းကို. dash အားသွင်း£ 16 အသီးအသီးကုန်ကျ – ဒါကြောင့်ဖုန်းနှင့်အတူအခြားဝယ်ယူရကျိုးနပ်မယ့်.
အဆိုပါ OnePlus3လည်း dual-Sim ဖုန်း, UK မှာအတော်လေးရှားပါးရာဖြစ်ပါသည်, သငျသညျနှစျဦးကွဲပြားခြားနားသောအစီအစဉ်များရှိသည်နိုင်အဓိပ္ပာယ်, တဦးတည်းဖုန်းကိုချိတ်ဆက်ပြီးကွန်ယက်များနှင့်ဖုန်းနံပါတ်များ – တဦးတည်း device အတွက်တစ်ဦးအလုပ်ဖုန်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖုန်းကိုတင်ဆောင်လာသောများအတွက်အသုံးဝင်သော, ဥပမာအားဖြင့်.
သာ. ကောင်း၏နေဆဲ, ကတစ်ပြိုင်နက်တည်း standby နှစ်ခု Sim ကဒ်များကိုထောကျပံ့နိုငျ, အရာနှစ်ခုလုံးကတ်များတစ်ချိန်တည်းမှာ 4G / 3G network ကိုချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်. 2G mode မှာအများစုဟာသာအထောက်အပံ့တစ်ကဒ်, ထိုကဲ့သို့သောဗြိတိန်၏သုံးအဖြစ်ရသည်မှာသိသာကွန်ရက်များ, တစ်ဦး 2G signal ကိုအသုံးမပြုကြသည့်.
OxygenOS သည်ကောင်း, ဒါပေမယ့်ပွင့်လင်း bootloader ကိုသင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင် Android နောက်ထပ်ဗားရှင်းကြောင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
OnePlus OxygenOS ဟုခေါ်တွင်သည် Android ၏စိတ်ကြိုက် version ကိုထုတ်လုပ်. နောက်ဆုံးဗားရှင်းအပေါ်အခြေခံသည် Android မှာ 6.0.1 Marshmallow ထိုသို့၏မျက်နှာပေါ်မှာပေါ်ပြေးအန်းဒရွိုက်ဗားရှင်းကိုမခံမကွဲပြားကြည့် Google ရဲ့ Nexus စမတ်ဖုန်း.
OxygenOS လက်ဝဲ-အများဆုံးပင်မမျက်နှာပြင် pane ထဲကအပေါ်ကုမ္ပဏီ၏ဒါခေါ်စင်နှင့်အတူအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသော launcher ရှိပါတယ် – Widgets တွေချပြီးအဘို့အရာအရပျ, apps များ icon များနှင့်ရာသီဥတု. အသုံးပြုသူများလည်း On-screen ကိုအညွှန်းခလုတ်ရှိသည်နိုင်, သို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်အောက်က capacitive touch နဲ့သူမြားကို အသုံးပြု. အာကာသကိုကယ်တင်အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်သူတို့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုစိတ်ကြိုက်.
အဆိုပါစင် Google ရဲ့ Nexus Android ဗားရှင်းအကြားတစ်ခုတည်းသောကွာခြားချက်အကြောင်း. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ဥပမာအားဖြင့်, ငါနောက်ဆုံးအသုံးအများဆုံး app ကိုချက်ချင်း switch ကိုမှမကြာသေးမီကအသုံးပြု apps များခလုတ်ကို၏နှစ်ဆကိုထိပုတ်ပါသတ်မှတ်ထား – အန်းဒရွိုက် N ကရဲ့နောက်ဗားရှင်းကဆက်ပြောသည်ခဲ့သည့်တစ်ဦးအင်္ဂါရပ်. အခြားမူအယာများ၏တစ်ဦးကရွေးချယ်ရေး, အဖြစ်ကောင်းစွာအကြောင်းကြားစာများအတွက်လာသို့မဟုတ်သင်၏လက်ကိုနှိုးဖို့ screen ကိုကျော်သောအခါ detect လုပ်ဖို့ကင်မရာကိုအသုံးပြုသည့်အခါ screen ကိုနှိုးထားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင် display ကို mode ကိုအဖြစ်, လည်းရရှိနိုင်ပါသည်.
OxygenOS ပိုကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, နောက်ကျောကိုချွတ်နဲ့ Android ၏ဖောင်း-အခမဲ့ဗားရှင်း.
အဆိုပါ OnePlus3လက်ဗွေစကင်နာရရှိနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးအိမ်တွင်း-button ကိုစတိုင်အာရုံခံကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
တစ်လက်ဗွေစကင်နာအဖြစ် home ခလုတ်ကို functions တွေ, အစာရှောင်ခြင်းနှင့်တုံ့ပြန်မှုသော. ထိုအချိန်ကာလအများစုမှာငါ့လက်မပထမဦးဆုံးအကြိမ်အသိအမှတ်ပြုရန်မယ်လို့, အကြှနျုပျ၏လက်မအတော်လေးထူးဆန်းထောင့်ကနေတပြင်လုံးကိုအာရုံခံကိရိယာကိုဖုံးလွှမ်းဘဲသောအခါရံဖန်ရံခါရုန်းကန်မယ်လို့.
ဒါဟာသိသိသာသာကျော်တိုးတက်လာသည် OnePlus 2, နှင့်သာအနည်းငယ်ပိုမိုဆိုးရွားထိုထက် ဟွာဝေးကနေအရမ်းအကောင်းဆုံး.
အဆိုပါ OnePlus ကကင်မရာ app ကိုပြုလုပ်ခဲယဉ်းဆိုးဓာတ်ပုံကိုယူစေဖို့ကြိုးစားပါတယ်နှင့်အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်အောင်မြင်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
နောက်ကျောအပေါ်အဓိက 16-megapixel ကင်မရာမတူညီအလင်းရောင်အခြေအနေများကိုဖြတ်ပြီးတချို့တော်တော်လေးကောင်းသောရိုက်ချက်များနိုင်စွမ်း. ကောင်းသောအလင်းရောင်နဲ့အတူကင်မရာအများကြီးဒုက္ခမပါဘဲမျှမျှတတ lifelike အဆင်းအရောင်နှင့်အသေးစိတ်ဓါတ်ပုံတွေကိုထုတ်လုပ်. ခက်ခဲအလင်းရောင်အခြေအနေများအတွက်, ထိုကဲ့သို့သောအတုအလင်းအောက်မှာသူတို့အားအဖြစ်, ရုပ်တုဆင်းတုအပြည့်အဝသီးနှံမှာတစ်နည်းနည်း grainy ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်.
ကင်မရာ app ကိုကောင်းသောဓါတ်ပုံတွေကိုရဖို့သုံးစွဲဖို့အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, ဒါဆန္ဒရှိလျှင် RAW ထောက်ခံမှုနှင့်အတူအပြည့်အဝကို manual ထိန်းချုပ်မှုရှိပါတယ်. 120fps မှာ slow motion 720p ဗီဒီယိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်, 4K 30fps မှာမှတ်တမ်းတင်အတူလိုအပ်မယ်ဆိုရင်.
ရှေ့ပေါ် 8-megapixel ကင်မရာ selfie ကင်မရာကိုငါသိမြင်င့်ဆုံးအသေးစိတ် selfies အချို့ကိုထုတ်လုပ်, ပင်အတော်လေးခက်ခဲလျှပ်စစ်ပြက်အခြေအနေများအတွက်.
ဒါကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူကိုင်စေအဆိုပါသေးငယ်တဲ့ bezel, ဒါပေမဲ့ငါသည်ငါ့လက်ဖဝါးတွေနဲ့ capacitive အညွှန်းခလုတ်ကိုသက်ဝင်ဖို့ကအတော်လေးလွယ်ကူကိုတွေ့
ထိုအကြောင်းကြားစာ slider ကိုနှင့်အတူဖုန်းအသံတိတ်သွားလွယ်ကူပြီးမြန်
2A မှတက် Chargers အာဏာကိုအခြား devices များမထိမခိုက်, ပုံမှန်အားသွင်းမှုနှုန်းသောဖြစ်ပါသည်
OnePlus £ 25 များအတွက် Dash ကားတစ်စီးအားသွင်းရောင်းချ
ဒါဟာ NFC ကိုရတယ်င်, သော OnePlus2ဒါပမေဲ့အံ့သွမပွုခဲ့ – အန်းဒရွိုက် Pay ကိုအဘို့ကောင်းသော
ဒါကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူထုံးစံကို Android ဗားရှင်းကို load မှအောင် unlocked အနေနဲ့ bootloader ကိုနှင့်အတူဖုန်းသင်္ဘောများ, သငျသညျ OxygenOS ကြိုက်နှစ်သက်မနေသင့်
ဒါဟာ Pre-installed မျက်နှာပြင်ကာကွယ်နှင့်တကွကြွလာ, ဒါပေမဲ့ပုံသို့မဟုတ်ကွေးဖန်အပေါ်အများဆုံးမျက်နှာပြင်ကာကွယ်တူ, အလွန်လက်မကဲ့သို့ရပ်တည်.
အဆိုပါကွေးလူမီနီယမ်ပြန်လက်၌ကြီးသောခံစားရနှင့်၎င်း၏£ 309 စျေးနှုန်း belays. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ OnePlus3£ 309 ကုန်ကျ ($399) နောက်ပိုင်းတွင်ရရှိနိုင်ရွှေအရောင်နှင့်အတူမီးခိုးရောင်အတွက်ရရှိနိုင်. ဖုန်းကုမ္ပဏီ၏အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖိတ်ခေါ်သည့်စနစ်မရှိဘဲဖြောင့် OnePlus မှရရှိနိုင်ဖြစ်လိမ့်မည်.
နှိုင်းယှဉ်, အ 5.5in Samsung ရဲ့ Galaxy S7 Edge £ 639 ကုန်ကျ, ထို Google က Nexus ကို 6P £ 449 ကုန်ကျနှင့် ဟွာဝေး P9 Plus အား £ 500 ကုန်ကျ.
သင့်ရဲ့£ 309 အဘို့အသငျသညျအဆင်းလှသောရ, ကောင်းစွာလုပ်သတ္တုစမတ်ဖုန်း, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဘက်ထရီသက်တမ်းနှင့်အတူ, ကောင်းသော screen နှင့်ကင်မရာများ, နှင့် snappy စွမ်းဆောင်ရည်ကို. သင်၌တညျဆောကျသိုလှောင်မှု Dual-Sim အထောက်အပံ့နှင့် 64GB လည်းရ. ဒါဟာအလွယ်တကူအကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းသည် OnePlus ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ.
ယခင် OnePlus စမတ်ဖုန်း၏အကြီးမားဆုံးတိုင်ကြားစာသူတို့အမှန်တကယ်မဝယ်ခဲ့ပုံကိုခက်ခဲခဲ့သည်, အရာမဆိုပိုအမှုမဖြစ်သင့်ပါဘူး, ကုမ္ပဏီ၏ပံ့ပိုးကူညီမှုရွေးချယ်စရာတိုးတက်လာဖို့ခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်စဉ်.
ဆော့ဖျဝဲ updates များကိုအရှိန်အပျေါမှာမေးခွန်းရှိပါသေးရဲ့, ဒါပေမယ့်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်အကွာအဝေးစျေးနှုန်းမှာတစ်ထိပ်တန်း spec စမတ်ဖုန်းများအတွက်, သင် OnePlus ထက်အများကြီးပိုကောင်းမရကြဘူး 3.
Cons: အဘယ်သူမျှမဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ဘက်ထရီ, ချဲ့သိုလှောင်မှုကိုအဘယ်သူမျှမ, Non-Dash တာဝန်ခံအာဏာကို Adapter ကမှနှေးနှေးအားသွင်း, VR များအတွက်မျက်နှာပြင်အနိမ့် res
X ကိုပြန်လည်သုံးသပ် OnePlus: ကြည့်နှင့်ပရီမီယံခံစားရကြောင်းဖြတ်-စျေးနှုန်းစမတ်ဖုန်း
Android မှာ, အပိုဒ်, မိုဘိုင်းဖုန်းများ, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, ရှမွေလသည် Gibbs, စမတ်ဖုန်း, နည်းပညာ, ဗြိတိန်နိုင်ငံနည်းပညာ
← ဟွာဝေး P9 Plus အားပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း အရိုးပွရောဂါမူးယစ်ဆေးများကအဆက်မပြတ်ရင်သားကင်ဆာဆဲလ်ကြီးထွားမှု →